Kedu ka esi kwado na Amazon maka isiokwu kacha mkpa?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma otú ị ga-esi bulie na Amazon maka isiokwu ndị dị mkpa gị - ị nọworị ebe kwesịrị ekwesị. Ndi ama ọfiọk ke akpa nsonaazụ nsonaazụ ke Amazon na-enweta ihe karịrị pasent 60 nke ọnụọgụ ọchụchọ niile si n'aka ndị na-ere ahịa na-achọ ihe ndị ere ere ahịa n'ebe ahụ? Ya mere, ọ pụtara na ịchọrọ ịchọta ngwa ahịa nke Amazon maka mkparịta ụka dị mkpa na ogologo-tail search phrases - ihe ndị ọzọ ahịa ị ga-erite uru site na. Ma, olee otú ị ga-esi bulie na Amazon maka isiokwu ndị dị mkpa, karịsịa ma ọ bụrụ na ị ka bụ onye na-ere akwụkwọ ọ bụla na-eburu ụzọ mbụ n'ime ebe ahịa ahụ juru ebe niile? Azịza dị mkpirikpi bụ - ịghọta isiokwu dị iche iche na isi ha bụ peculiarities nke a na-ahụ site na echiche nke A9 search ranking algorithm. Ya mere, n'okpuru ebe a, m ga - egosi gị otú ị ga - esi bulie na Amazon - site na inye ntụziaka dị mkpirikpi na isi ihe dị mkpa na ụzọ ziri ezi nke ịmepụta ha n'ebe ahụ.
Olee otú ị ga - esi na Amazon maka ihe kacha mkpa
Tupu ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị mee ihe iji mee nchọpụta nke Amazon.Cheta, ọ na-eme isi ntọala maka ogo ike na Amazon - replica audemars piguet watches for sale. Ndị a bụ ụfọdụ isi okwu na nkọwa maka ị ghọtara otú ịkwado na Amazon maka isi isi isiokwu gị. Jide n'aka na ị nwetara ha niile:
Keywords - Amaokwu Amazon, site na echiche nke SEO na azụmahịa ecommerce nke oge a, ga - abụ "mkpirisi" na-achịkọta ihe bụ isi nke ihe dị n'ahịa ma ọ bụ mmekọrịta zuru oke na ụdị ngwaahịa ahụ. Keywords ndị dị mkpa bụ akụkụ dị oke mkpa nke nchịkọta njirimara ngwaahịa gị na ọchụchọ Amazon.
Long-Tail Keywords - guzoro maka otu ahịrịokwu ma ọ bụ isiokwu ejikọta na ndị na-ere ahịa ndụ nwere ike ịchọta maka ajụjụ ọchụchọ ọchụchọ na Amazon. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, okwu ndị dị ogologo oge bụ Amazon bụ ihe jikọrọ ọnụ ọgụgụ nke ejiri mee ihe maka nchọpụta ngwaahịa ọtụtụ ugboro. N'ezie, karịsịa ụdị okwu ndị a na-eme ka ihe dịka pasent 70 nke ọchụchọ ọchụchọ ndị ndị ahịa na-ebi ndụ na-eme n'ebe ahụ.
Ọ bụ ya mere na ọ dị ọbụna mkpa ka ị mata njikwa ọchụchọ ogologo ogologo nke dị mkpa maka ihe gị na ere ma ọ bụ ngwaahịa. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ohere ọhụụ nke igosi ndị na-azụ ahịa na-eleba anya nke ndị nwere ike ịchọta achọ ngwaahịa ndị a na-ere n'ahịa n'ebe ahụ. N'etiti ndị ọzọ, ana m akwado iji ngwaọrụ nyochaa isiokwu ndị a, akọwapụtara nke ọma maka ikpo okwu ecommerce ahụ.
Okwu ndị ahịa - ihe dị mma ịmalite iji mee nnyocha ngwa ngwa na Amazon, na-enyere ọtụtụ ndụmọdụ bara uru bara uru, bụ nke a na-ejide n'aka ndị isi ndị na-ere ahịa na niche gị ma ọ bụ ngwaahịa.
Jungle Scout - ọ bụ otu ụlọ nkwụsị maka ụlọ ahịa ọ bụla n'ahịa na Amazon.E wezụga na data mkpokọta ya bara uru, Jungle Scout gosipụtara nnọọ aka mgbe ọ na-abịa n'ichepụta ụfọdụ ohere ọhụụ ọhụrụ, maọbụ mkpa ọ dị inweta otu ihe ọmụma bara uru bara uru - ma na ngwaahịa ndị nwere ike ịba uru, na ikwu ogologo okwu ahụ Njikọ dị mkpa iji kwado maka.